Bisadaha Noti waa degel ilaa 2012kii kugu wargalinaya wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u daryeesho bisaddaada: cudurada, waxyaalaha uu u baahan yahay, sida loo doorto cuntadiisa, waa maxay cudurrada uu ku dhici karo, iyo in badan, aad iyo aad u badan si waad ku raaxeysan kartaa shirkaddaada sanado badan. Markasta oo ay sii badato.
Kooxda tifaftirka ee Noti Gatos waxay ka kooban yihiin tifaftirayaasha soo socda. Haddii aad xiiseyneyso inaad nala shaqeyso, waa inaad kaliya buuxi foomka soo socda waana kula soo xiriiri doonaa.
2 Tifatireyaashii hore
2.2 Rosa Sanches
Waxaan u arkaa bisadaha xayawaan aad u wanaagsan oo aan waxbadan ka baran karno iyaga, iyo waliba nafteenaba. Waxaa la sheegaa in caruurtan yaryar ay aad u madaxbannaan yihiin, laakiin runtu waxay tahay inay yihiin wehel iyo saaxiibo waaweyn
Maaddaama aan xasuusan karo waxaan isku qaddarin karaa nafsadeyda bisad. Sifiican ayaan u aqaan iyaga maxaa yeelay tan iyo markii aan yaraa waxaan ku haystay bisado guriga waxaanan ka caawiyey bisadaha dhibaatooyinka haysta… Uur ma yeelan karo uur aan ku noolaado la'aantood kalgacal iyo kalgacal aan shuruud lahayn! Waxaan had iyo jeer ku jiray tababar joogto ah si aan u awoodo inaan wax badan uga barto iyaga iyo in bisadaha aniga iga masuulka ahi, had iyo jeer leeyihiin daryeelka ugu fiican iyo jacaylkayga ugu daacadsan iyaga. Sababtaas awgeed, waxaan rajeynayaa inaan awood u yeesho inaan ku gudbiyo aqoontayda oo dhan ereyo iyo inay adiga waxtar kuu leeyihiin.
Waxaan ahay reer Kolombiya ah oo jecel bisadaha, taas oo aan aad u xiisaynayo dhaqankooda iyo xiriirka ay dadka la leeyihiin. Waa xayawaan aad u caqli badan, oo aan cidlo u ahayn sida ay innagu rumaysan lahaayeen.
Waxaan dhihi karaa bisadu waxay noqon kartaa ninka ugu fiican saaxiibkiis. Had iyo jeer hareerahooda, waxay ku raaxaystaan ​​oo ila yaabaan awooddooda weyn ee laqabsashada iyo, wixii ka sarreeya, kalgacalka aan shuruud lahayn ee ay ku tusayaan. In kasta oo aad lagaa go'ay oo aad sumcad ku heshay madax-bannaanida, had iyo jeer wax badan ayaad ka baran kartaa iyaga, haddii aad leedahay dulqaad u leh barashadooda.
Waxaan dareemayaa xiiso weyn oo ku saabsan adduunka bisadaha taas oo igu hogaamineysa inaan baaro oo aan doonayo inaan la wadaago aqoontayda. Ogaanshaha dabeecadooda, luuqadooda jir, iyo qaab nololeedkooda ayaa muhiim u ah wada noolaanshaha wanaagsan.